Paskal The Movie (2018) | MM Movie Store
ဖွဈရပျမှနျ ဇာတျကားတှကေိုမှ ကွိုကျနှဈသကျကွတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ၂၀၁၈ ထှကျ PASKAL ဆိုတဲ့ အကျရှငျ ဒရာမာ မလေးရှားကားသဈကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျRating အနနေဲ့ လညျး IMDb – 8.6/10 တောငျရထားတယျ…ဒီကားက မလေးရှားက ရိုကျထားတယျဆိုပွီး ဒီလောကျလနျးလိမျ့မယျ မထငျဘူးလို့ထငျရငျတော့ မှားသှားလိမျ့မယျ…
လကျနကျတှကေလညျး နောကျဆုံးပျေါစီးရီးတှအေားလုံးနီးပါးအသုံးပွုထားသလို စဈဆငျနှဲတဲ့ဟနျပနျတှနေဲ့ စဈအငျးအားပွသှားတာတှကေ လကျဖြားခါလောကျစရာပါပဲ..ပွီးတော့ ရိုကျထားထားတာတှကေလညျး တျောတျောကိုလှတယျ..
မလေးရှားကားဆို စုနျးကားလောကျပဲ သိတဲ့ ကြှနျတျောတို့ ခငျဗြားတို့အဖို့ ပါးစပျအဟောငျးသားတောငျဖွဈသှားစလေိမျ့မယျ….နောကျဆုံးပွောရရငျ Shooter ကားထဲမှာ Mark Wahlberg သုံးသှားတဲ့ CheyTac M200 ဆိုတဲ့ စနိုကျပါကွီးတောငျပါလိုကျသေးတယျ…….
ဗိုလျ ကွီး အာမနျဆိုတဲ့ မလေးရှား အထူးတပျဖှဲ့ဝငျတဈယောကျဟာပါစကယျဆိုတဲ့ အထူးတပျဖှဲ့တဈခုမှာ တာဝနျထမျးဆောငျနရေငျး မိခငျကိုလုပျကြှေးနတေဲ့ စဈသားကောငျးတဈယောကျဖွဈတယျ…
သူ့ရဲ့အဖဟောလညျး နိုငျငံတျောအတှကျတာဝနျထမျးရငျး အသကျစှနျ့သှားတဲ့ သူရဲကောငျးတဈယောကျဖွဈလို့ အမကေ သားအတှကျစိုးရိမျပမေယျ့ တားတော့မတားခဲ့ဘူးဆိုပါတော့…ပါစကယျအဖှဲ့ထဲမှာ ဂြိုရှာဆိုတဲ့ လူတဈယောကျနဲ့ အာမနျဟာ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးတှဖွေဈခဲ့ကွတယျ..
အာမနျ ဂြိုရှာ တို့နှဈယောကျအပါအဝငျ ဂကျြဆိုတဲ့တဈယောကျစုစုပေါငျးသုံးယောကျဟာ အထူးလကျရှေးစငျတှအေဖွဈ ရှေးခယျြခံရတယျ…။အဲ့ဒီနောကျမှာ ပငျလယျဓါးပွအမှုတဈခုနောကျကိုလိုကျရငျး မထငျမှတျထားတဲ့ ကံကွမ်မာဒီရလှေိုငျးတှအေောကျမှာ မလေးရှားတပျဖှဲ့တှဘေယျလိုအလှညျ့အပွောငျးတှေ ကွုံတှရေ့မလဲ ကိုယျတိုငျကွညျ့ရှုခံစားတျောမူကွပါ…။
ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်ကားတွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ၂၀၁၈ ထွက် PASKAL ဆိုတဲ့ အက်ရှင် ဒရာမာ မလေးရှားကားသစ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Rating အနေနဲ့ လည်း IMDb – 8.6/10 တောင်ရထားတယ်…ဒီကားက မလေးရှားက ရိုက်ထားတယ်ဆိုပြီး ဒီလောက်လန်းလိမ့်မယ် မထင်ဘူးလို့ထင်ရင်တော့ မှားသွားလိမ့်မယ်…
လက်နက်တွေကလည်း နောက်ဆုံးပေါ်စီးရီးတွေအားလုံးနီးပါးအသုံးပြုထားသလို စစ်ဆင်နွှဲတဲ့ဟန်ပန်တွေနဲ့ စစ်အင်းအားပြသွားတာတွေက လက်ဖျားခါလောက်စရာပါပဲ..ပြီးတော့ ရိုက်ထားထားတာတွေကလည်း တော်တော်ကိုလှတယ်..
မလေးရှားကားဆို စုန်းကားလောက်ပဲ သိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့အဖို့ ပါးစပ်အဟောင်းသားတောင်ဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်….နောက်ဆုံးပြောရရင် Shooter ကားထဲမှာ Mark Wahlberg သုံးသွားတဲ့ CheyTac M200 ဆိုတဲ့ စနိုက်ပါကြီးတောင်ပါလိုက်သေးတယ်…….
ဗိုလ် ကြီး အာမန်ဆိုတဲ့ မလေးရှား အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဟာပါစကယ်ဆိုတဲ့ အထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်း မိခင်ကိုလုပ်ကျွေးနေတဲ့ စစ်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်…
သူ့ရဲ့အဖေဟာလည်း နိုင်ငံတော်အတွက်တာဝန်ထမ်းရင်း အသက်စွန့်သွားတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ အမေက သားအတွက်စိုးရိမ်ပေမယ့် တားတော့မတားခဲ့ဘူးဆိုပါတော့…ပါစကယ်အဖွဲ့ထဲမှာ ဂျိုရွှာဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ အာမန်ဟာ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်..
အာမန် ဂျိုရွှာ တို့နှစ်ယောက်အပါအဝင် ဂျက်ဆိုတဲ့တစ်ယောက်စုစုပေါင်းသုံးယောက်ဟာ အထူးလက်ရွေးစင်တွေအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတယ်…။အဲ့ဒီနောက်မှာ ပင်လယ်ဓါးပြအမှုတစ်ခုနောက်ကိုလိုက်ရင်း မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကံကြမ္မာဒီရေလှိုင်းတွေအောက်မှာ မလေးရှားတပ်ဖွဲ့တွေဘယ်လိုအလှည့်အပြောင်းတွေ ကြုံတွေ့ရမလဲ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခံစားတော်မူကြပါ…။
The Good Doctor (Season 1) ၊ အပိုငျး (၁၃)